Tsy nahomby tamin'ny fanombohana Steam ny PUBG - Torolàlana hanamboarana - Lalao
Tsy nahomby tamin'ny fanombohana Steam ny PUBG - Torolàlana hanamboarana
PUBG dia iray amin'ireo lalao malaza indrindra amin'ny Internet. Manana fanarahana miavaka amin'ny Internet izy io. Gamers an-tserasera an-tapitrisany no milalao azy amin'ny sehatra rehetra. Ny fifantohanay dia ireo mpilalao PC izay nandany ny vola azony mafy hividianana ity lalao ity. Misy olana vitsivitsy mety hamely ny olona rehetra. Ny iray amin'izany dia tsy nahomby tamin'ny fanombohana ny lesoka etona. Fahadisoana mampivarahontsana izay tadiavin'ny gamer tsirairay tsy hialana.
Amin'ity toro-lalana ity dia hiezaka izahay hampiseho aminao ny fizotry ny fanamboarana ity olana ity. Ny fikarohana kely dia afaka mitondra ny fianaranao amin'ny lalao amin'ny dingana manaraka. Isika rehetra dia te-hankafy lalao mahafinaritra sy ilay maody battle royale mahafinaritra.
Tsy nahomby tamin'ny fanombohana ny etona ny PUBG? Ireto misy fomba tsara hanamboarana
Tsy misy antony manokana azo tondroina. Mpampiasa an'arivony maro no miatrika an'io olana io. Ny olon-drehetra dia manana traikefa miavaka amin'ny lalao. Noho izany dia mijery fomba maro hamahana ity olana ity izahay. Ny ekipanay manam-pahaizana koa dia nahita an'io olana io. Izany no antony ilana firesahana amin'ny antsipiriany momba an'io olana io. Vakio miaraka raha te hahalala bebe kokoa momba ireo fomba samihafa hita eto.
Fomba # 1:
Ny fanamboarana voalohany dia tsotra. Tsy mila fahaizana teknolojia be izany. Izay efa nampiasa setroka dia tokony ho afaka hanao izany haingana. Manoro hevitra anao izahay hanamarina ny fahamendrehan'ireo rakitrao lalao. Indraindray rehefa mientanentana loatra amin'ny lalao iray isika dia mety ho ozona izany. Fahita eran'izao tontolo izao ny olana amin'ny Internet. Ny haben'ny fampidinana lalao dia goavana, ary ny fisie iray dia afaka manadino ny fametrahana anao. Ny fizotran'ny fanamarinana dia hampifanaraka ny rakitrao amin'ny lalao amin'ny mpizara. Raha misy rakitra tsy ampy, dia ho azo sintomina io rakitra manokana io. Ireto ny dingana hanamarinana ireo rakitrao amin'ny lalao.
Atombohy ny rindrambaiko etona amin'ny fitaovan'ny solosainao. Handray ny firariana fivarotana etona avy amin'ny pejy fandraisana ireo mpampiasa. Mila tsindrio ny safidin'ny tranomboky hahitanao ny lalao rehetrao.
Ao amin'ity fizarana famakiam-boky ity dia tsy maintsy misy lalao maro, arakaraka ny angonao. Tokony ho hitanao eto ny lohateny PUBG.
Ireo mpampiasa dia tsy maintsy manindry ny bokotra PUBG eo amin'ny tranomboky. Hiteraka safidy vitsivitsy eo amin'ny efijeryo io.Azonao atao ny manindry ny bokotra fananana hanombohana ny fizotrany. Hipoitra eo amin'ny efijeryo ny boaty iray.
Na iza na iza dia afaka manamarina ny fahamendrehan'ireo rakitrao lalao. Ny boaty ambony eo amin'ny efijery misy anao ny fananana sy ny fampahalalana rehetra momba ny lalao.Tsidiho ny safidin'ny rakitra eo an-toerana amin'ny pop-up. Tsindrio ny bokotra, ary hanomboka ny fizotrany.
Ankehitriny dia tsy maintsy omena fotoana kely ny fampiharana etona hanamarinana ny fiara misy anao. Manoro hevitra anao izahay mba tsy hanao asa hafa mandritra io fotoana io. Ny fizotran'ny famakiana fiara sarotra dia mety hampiadana be.
Fomba # 2:
Ny vahaolana faharoa izay misy amin'ity olana ity dia ny handroso mialoha. Ny mpampiasa vitsivitsy dia mazàna miatrika ireo olana amin'ny client Steam ihany. Ny rindranasa dia afaka mahazo buggy mitondra mankany amin'ny lesoka 'PUBG tsy nahavita nanomboka ny etona'. Hanandrana sy hanamboatra ny mpanjifa etona izahay ary hihazakazaka indray ny lalao. Araho ny dingana etsy ambany.
Mihazakazaha command prompt (Admin)
Amin'ity dingana ity dia hanamboatra ny mpanjifa etona izahay amin'ny alàlan'ny command prompt. Raha te hanova ny rindranasa rehetra dia mila tombontsoa manokana ho an'ny Admin izahay. Tsy maintsy mihazakazaka amin'ny rindran-damina izahay.
Azonao atao ny mitady cmd ao amin'ny bara fitadiavana windows. Tsindrio havanana amin'ny valin'ny fikarohana ary safidio ny mihodina ho admin. Hiseho ho azy amin'ny valin'ny fikarohana ihany koa izy io.
Raha vantany vao mihazakazaka ao amin'ny maody admin ny CMD, afaka manomboka mampiasa ny fizotrany fanamboarana isika. Azonao atao ny mampiditra ireto kaody manaraka ireto - C: Program Files (x86) Steam bin SteamService.exe / fanamboarana. Arakaraka ny toerana misy ny mpamily anao no anaovy ny fanovana. Azonao atao ny mandika-apetaka eto amin'ity kaody ity raha te hanana ny vokatra tsara indrindra. Hanomboka ho azy eo amin'ny solosainao ny fizotrany.
Tadiavo ny làlan'ny serivisy etona
Betsaka ny olona mety miatrika olana amin'ny fitadiavana ny làlan'ny serivisy etona. Azonao atao ny mahita azy mora foana amin'ny alàlan'ny mpitantana ny lahasa. Ampandehano ny solosaina amin'ny solosainao ary zahao ny faritra antsipiriany. Eto ianao dia mila mahita ny safidin'ny serivisy mpanjifa. Kitiho havanana amin'ny data ary avy eo safidio ny toerana fisokafana. Hitondra anao any amin'ny lahatahiry ny fizotran'ny etona io.
Atsaharo ny solosaina
Rehefa vita ireo dingana rehetra ireo dia ny famerenana amin'ny laoniny ny solosainao no dingana farany. Izy io dia hiantoka ny fiatraikany amin'ny fanovana rehetra.
Fomba # 3:
Ny fanamboarana fahatelo amin'ity torolàlana ity dia tena ilaina. Tsy handany fotoana be aminao ny fizotrany. Mpampiasa maro no mety miatrika olana amin'ny fidirana amin'ny fisie. Ilaina ny manandrana ny zava-drehetra hamahana ity olana ity. Amin'ity fanamboarana ity dia hitantana ny mpanjifa etona ho mpandrindra amin'ny PC izahay. Izy io dia hanome ny fahazoana miditra amin'ny fisie amin'ny rakitra rehetra ary hiasa tsara amin'ny PUBG. Afaka manomboka milalao haingana ny lalao amin'ny fotoana fohy ianao. Manoro hevitra anao izahay hitsidika ny sary famantarana etona eo amin'ny biraonao ary hitantana azy amin'ny maha-mpitantana anao.
Fomba # 4:
Ny vahaolana dia vahaolana tsotra iray hafa izay tsy eritreretin'ny saina tsotra. Amin'ity fanamboarana ity dia hanafoana ny olana fanatsarana ny efijery feno izahay. Lalao vitsivitsy sy ny app etona no mety hiatrika olana noho ity lesoka ity. Izy io dia mety hiteraka ny 'PUBG tsy nahavita namorona olana momba ny etona.' Azonao atao ny manafoana an'ity olana ity amin'ny fitsidihana ny lahatahiry etona ao amin'ny solosainao. Ireto ny dingana.
Ireo mpampiasa dia tokony hanomboka amin'ny fitsidihana ny toerana fametrahana ny solosain'izy ireo. Azonao atao ny mahita azy io ao amin'ny fizarana rakitra C drive. Safidio ny kisary mpanjifa etona ary kitiho eo ankavanana. Eo ambany, ho hitanao ny fizarana fananana.
Ao amin'ny kiheba fananana dia mila mitsidika ny fizarana mifanentana ianao. Safidio ireo safidy fanatsarana efijery feno izay azo jerena. Tokony apetrakao ny fanovana alohan'ny hahafahanao mankafy ny lalao indray.
Amazing! Azonao atao izao ny manandrana mampiasa PUBG indray amin'ny PC-nao.
Ireto ny sasany amin'ireo tetika mahafinaritra tianay hizara aminao. Ny PUBG tsy nahomby tamin'ny fanombohana ny hadisoana etona dia mahazatra. Azonao atao ny manamboatra haingana ny olana toy izany ao an-trano. Manantena izahay fa hanampy anao hamaha ny olana ity torolàlana ity.
Wyze Watch Pre Order: Ahoana no hividianana torolàlana?
Youtube TV vs Hulu Live - Iza amin'ireo no serivisy tsara indrindra?
inona no dikan'ny aip 701 amin'ny netflix
mijery sarimihetsika hd anglisy amin'ny Internet
apetraho amin'ny solosaina finday chromecast google
tranokala ambony handefasana sarimihetsika
emulator lalao ho an'ny pc download maimaim-poana
tranokala sarimihetsika maimaimpoana azo antoka tsara indrindra
super smash bros 2 flash tsy voasakana